बाबुराम पुत्री मानुषीले पनि प्रदर्शन गरिन बेबी बम्प – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ०८, २०७८ समय: १६:५४:१४
नायिका प्रियंका कार्कीले आफू गर्भवती भएदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेर गसिप बनिरहेकी छिन् । कार्कीले ताली र गाली दुवै खाइरहेकी छिन् ।
केही दिन अगाडी पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि प्रियंकालाई सपोर्ट गर्दै ‘पितृसत्ताको जालो च्यात्ने साहस’ भन्दै ट्विट गरे । भट्टराईले उक्त ट्विट मार्फत धेरै नकारात्मक गाली खानुपर्‍यो ।
अहिले उनै भट्टराईकी छोरी मानुषीले पनि बेबी बम्पको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
बाबुरामको यो ट्विटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै माओवादीनिकट पूर्वसञ्चारकर्मी आस्था केसीले लेखिन्, ‘हजुरकी सुपुत्री मानुषी यमी भट्टराईलाई यस्तो सुन्दर कार्य किन नगराउनु भएको ? खोइ देखिएन त ? कस्ता कस्ता मान्छेलाई आदर्श नेता मानेर हिँडिएको रहेछ । मानिस सामाजिक प्राणी हैन र ? कि केही मानिसलाई पशुलाई जस्तो जे गरे पनि छुट र स्वतन्त्रता हुने हो ?’
आस्थाको यो ट्विटमाथि डा. भट्टराईकी पुत्री मानुषी यमी भट्टराईको जवाफ आएको छ । उनले ‘मेरो सुन्दर कार्य हेर्नु अब’ भन्दै आफ्नो गर्भवती भुँडीको पुरानो तस्बिर सेयर गरेकी छन् ।
बेबी बम्पको तस्बिर सार्वजनिक गर्नेमा प्रियंका पहिलो नेपाली महिला होइनन् । यसअगाडि पनि धेरै महिलाहरूले बेवी बम्पका फोटोसूट गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए । तर प्रियंकाले लगातार तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्नाले उनी चर्चामा आएकी हुन् ।
Last Updated on: July 23rd, 2021 at 4:54 pm